मिलानमा एउटा उदाहरणिय दशैं
नेपाल मितेरि मञ्चले ईटालीको मिलान शहरमा एउटा उदाहरणिय दशैं मनाएको छ । यो दशैं धेरै नेपालीकालागि नमूना बन्न सक्छ । किनभने प्रवाशमा आफू बसेको देशका नागरिकहरुलाई समेत निम्तालु बनाएर मनाएको यस्तो दशैं कमै देखिने गरेको छ । गत आइतवार आयोजित यो दशैं मनाउन मञ्चले नेपाल प्रेमी ईटालियनहरु र त्यहांका राजनितिक संगµठनका स्थानियलाईपनि निम्ता दिएको थियो । यो निम्तोलाई स्विकार गर्दै त्यहाँको वाम पार्टीका केहि स्थानिय कार्यकर्ता र नेपालप्रेमी ईटालियनहरुपनि सहभागि भए । तिनले नेपालीहरुसँगै दशैं मनाए । दशैंको गित सुने । नेपाली ढाका टोपी, दशैंको जमरा र टिका थापे । नेपालीहरुसितै दशैंको नाचगानमा सहभागि भए । तिनले मुक्तकण्ठले नेपाली पर्व र नेपाली एकताको प्रशंसा गरे ।
यो दशैं यस कारणपनि फरक थियो कि दशैंको टिका लगाउन्न सबै पुरुषहरुको लागि नेपाली ढाका टोपीको ब्यवस्था गरिएको थियो । यसको प्रायोजन सिताराम त्रिपाठीले गरिदिएका थिए । त्यस्तै, महिलाहरुकालागि स्रिङ्गारका सामानको उपहार थियो । नेपाली राष्ट्रिय गानबाट दशैंको उद्घाटन शुरु गरियो । त्यसपछि थोरै बक्ताले छरितो शुभकामना दिए । आशन भाषणबाट दिक्क भएका नेपालीहरुले यो कार्यक्रममा पट्यारलाग्दो भाषण सुन्नु परेन । हलमा प्राविधिक पाटोको जिम्मेवारी लिएका क्रिष्ण सुबेदीले एकै वाक्यांशमा सबै नेपालीलाई दशैंको शुभकामना दिएर मन्तब्य टुंग्याए । कार्यक्रम सन्चालक भवेशले अनावश्यक ब्याख्या नगरि जिम्मेवारी पुरा गरे ।
कार्यक्रमका सभापती नेपाल मितेरी मञ्चका अध्यक्ष विशाल तामाङले मिलान जस्तो सानो शहरमा करिब तिन सय नेपाली मात्रै रहेको र यहाँ सबै जातजाति, भाषा, भाषी, समूदाय, क्षेत्र र चिन्तनका नेपाली एकै सूत्रमा मिलेर बसेको उदाहरण पेश गरे । उनले मिलानवासी नेपालीहरुको यो सद्भाव कुनैपनि हालतमा फुटाउन नदिने र यो सद्बभावलाई अनेक पार्टी, जात र जातिमा बिभाजित गराउन खोज्नेहरुको सपना पुरा हुन नदिने उद्घोष गर्दा तालीले हल गुन्जायमान भएको थियो । उनले भने 'तिन सय नेपाली रहेको यो शहरमा अनेक स्वार्थकालागि दर्जनौं संस्थाको खाँचो किन ? यहि मितेरी मञ्चबाट सारा नेपालीका सुख, खुशि र गुनासा पुरा गर्न सकिन्न ? मिलेर यहि बसौं, झगडा पनि गरौं, आरोप र प्रत्यारोक, बाद र बिवाद गरौं । तर अन्त्यमा सहमतीमै हाम्रा समस्या हल गरौं र हाँसेरै हलबाट बाहिर निस्कियौं । बिदेशमा बसेका हामी नेपाली अनेक जातजाति र भाषा वा अन्य राजनितिक स्वार्थकालागि फुट्नु हुँदैन । मिलेरी मञ्चले त्यस्तो अवस्था स्रिजना हुन दिने छैन ।"
मितेरी मञ्चले ईटालीमा बसेर नेपाली समूदायकालागि उल्लेख्य योगदान गरेका चार ब्यक्तित्वहरुलाई सम्मानपनि गर्‍यो । ति थिए, डा भिम बहादुर बम, भक्त बहादुर गुरुङ, रिचर्ड भण्डारी र बिजय भुसाल । यि तिनै जनालाई खादा ओढाएर कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लेखक तथा पत्रकार ददि सापकोटाले सम्मान गरेका थिए । उनीहरुलाई सम्मान पत्रपनि दिईयो । सम्मानिय चार जना ब्यक्तिलेनै छोटकरीमा आफ्ना भनाई राखेका थिए । डा वम कार्यक्रमका अतिथिपनि थिए । एन आर एन ए ईटालीका संस्थापक अध्यक्ष उनले सबै नेपालीलाई एक जुट भएर, मिलेर जान सुझाउ दिए । संस्थाले गरेको सम्मान आफ्नो मात्रै नभएर सबै नेपालीको साझा सम्पत्ती र सम्मान रहेको उनले भनाई राखे ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पत्रकार, लेखक ददि सापकोटाले 'सबै नेपालीलाई बिभाजित नभैकन मिलेर बस्न सुझाव दिए । उनले 'नेपालीहरु आफ्नो देशका नेता, सामाजिक संरचना, आर्थिक अवस्थालगायत अनेक समस्याले पिल्सिएर आएपनि बिदेशमा आएर फेरि तिनैको सिको नगर्न सुझाव दिए । बरु सर्वप्रथम आफ्नो घर र परिवार मिलाएर आग्रह गरे । 'सबैभन्दा पहिले तपाईहरु आफ्नो ब्यक्तित्व बनाउनुस । आफ्नो घर र परिवार बलियो बनाउनुस । त्यसपछि जति सकिन्छ त्यति सामाजिक काम गर्नुस, समाजका बारेमा सोच्नुस ।'
बिदेशमा आएका नेपालीहरुले आफ्ना वालवालिकाको भविष्य उच्च बनाउनुपर्ने र आफू बसेको देशका नागरिकसित प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाएर उच्च पदमा पुग्ने बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए 'तपाई हामीले हाम्रा वालवालिकालाई यो देशको उच्च निकायमा पुगेका ईटालियन नागरिक सरह बनाउन सक्नुपर्छ । हामीले जस्तै अरुले छोडेका सानातिना काम हाम्रा वालवालिकालेपनि खोज्दै भौंतारिने बनाउनु हुन्न । यो देशका उच्च पदमा पुगेका नागरिक सरह हामीले हाम्रा वालवालिकालाई बनाउन सके मात्रै हाम्रो इज्जत र प्रतिष्ठा उच्च बन्छ र त्यस्ता वालवालिकाकालागि हामीले धन सम्पत्ती थुपारेर राखिदिनुपनि पर्दैन ।' आफ्ना वालवालिका सभ्य, सुसंस्क्रिति र शालिन बन्छन् कि बन्दैनन् त्यो नेपाली समाज र नेपाली समूदायको ब्यवहारबाट सिकेर अनुसरण गर्ने बताए ।
यस्ता कार्यक्रमहरुमा वालवालिकाहरुकालागि मनोरन्ज्नको पाटो हेक्का राख्ने गरिन्न । तर यो पटक दशैं कार्यक्रमको आयोजना गर्दा नेपाल मितेरी मञ्चले त्यो हेक्का राखेको थियो । वालवालिका रमाउने भोजन मात्रै होइन तिनकालागि रमाईलो बनाउन वालवालिकाले बेलुन फुटाउने प्रतिस्पर्धा गरे । त्यसकालागि हरेक वालवालिकाको गोडामा बेलुन बाँध्ने र हरेकले आफ्नो बेलुन जोगाउँदै अर्काको बेलुन फुटाउने । अन्तिममा जसको बेलुन सुरक्षित रहन्छ उहि बिजय बन्ने । यसमा शेरलिन घिमिरे, उन्नती पौडेल र स्वेता सुबेदी क्रमश प्रथम, दोस्रो र तेस्रो बन्दै पुरस्कार हात पारे ।
आफ्ना चेलीहरुपनि रमाउन् भनेर चेलीबेटीहरुकालागि पनि म्युजिकल चेयर भन्ने प्रतिस्पर्धा राखिएको थियो । त्यसमा जति जना महिला सहभागि छन् ति सबैकालागि एक एक वटा कुर्सीको ब्यवस्था । पछि एक एक वटा कुर्सी घटाउँदै लैजाँदा जो कुर्सी बिहिन हुन्छ ऊ कार्यक्रमबाट बाहिर निस्किनुपर्थ्यो । अन्तिममा जसले कुर्सी ओगटन् सक्छ उहि बिजेता बन्ने प्रावधान थियो । यसमा ममता पोख्रेल, रन्जना खरेल र स्म्रिति थापा क्रमश प्रथम, दोस्रो र तेस्रो बने ।
कार्यक्रममा गित, कविता र न्रित्यमा भाग लिन उत्सुककालागि ब्यवस्था गरिएको थियो । अग्रिम नाम लेखाउनेले आफ्नो आफ्नो खुबी वा रहर प्रस्तुत गर्न सक्थ्यो । यहि प्रावधान अनुसार धेरैले आफ्ना गित, न्रित्य र संगित सुनाए । नेपाली गितमा साना साना वालिकाहरुले लोभलाग्दा नाच देखाएर ईटालियन समाजसेवी र नेपालप्रेमीहरुलाई चकित पारिदिए ।
कार्यक्रम ढिलोसम्म आइपुग्नेले टिका र जमरा लगाएर दशैंको धित मार्न पाउने ब्यवस्था मिलाइ एको थियो । त्यसमा नेपाली टोपी, टिका र जमरा लगाएर थुप्रै ईटालियनहरु मख्ख परेका थिए । नेपालमा ४० पटक सम्म भ्रमण गरेकी सिल्भीले नेपालको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेकि थिईन् । पहेंला जमरा, दशैंको गित र धुन, नेपाली ढाका टोपीमा सजिएका ईटालियन र नेपाली पुरुष, सारीमा सजिएका नेपाली चेली, जमरा र रातो टिका लगाएर मुसुक्क मुसुक्क मुस्कुराउँदै नेपालीहरुसितै बसेर नेपाली खानामा रमाएका ईटालियन नागरिक । झट्ट हेर्दा यो नेपालको दशैं जस्तो लाग्थ्यो ।
कार्यक्रममा रमाएका धेरै नेपालीले टिप्पणी गरेका थिए 'यस्तो दशैं त कहिल्यै भएको थिएन मिलानमा ।' केहिको भनाई थियो 'यस्तो दशैं त बिदेशमा हामीले देखेकै थियनौं । यस पाली साँच्चै धित मर्नेगरि दशैं मनाउन पाईयो ।'
More in this category: « रामचन्द्र खरेल द्वारा एनआरएनए का सह-कोषाध्यक्ष उम्मेदवारको घोषणा	पोर्तुगलमा १४ बर्ष जेल सजाय भोगिरहेका नवीन गिरीले जेलभित्रबाटै लेखे सबैको मुटु कमाउने र मनै रुवाउने कारुणिक खुला पत्र »